နှလုံးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေတဲ့ ဆီကြော်အစားအစာများ - Hello Sayarwon
လေ့လာချက်အသစ်တစ်ခုအရ ကြော်ထားသော အစာများ များများစားလေ နှလုံးအားနည်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေများလေလေဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာချက်များအရ ကြော်ထားသော အစာများအရေအတွက်နဲ့ စားသုံးသည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် နှလုံးအားနည်းခြင်းနဲ့ အခြားသော နာတာရှည်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။
နှလုံးအားနည်းခြင်းသည် နှလုံးမှ သွေးများကို ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ ရောက်အောင် မညှစ်ပေးနိုင်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက္ခဏာများမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနဲ့ အသက်ရှူမဝခြင်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးအားနည်းခြင်းဟာ အသက် ၆၅ နှစ်နှင့် အထက်လူကြီးများရဲ့ ဆေးရုံတက်ရသော အများဆုံးအကြောင်းရင်းထဲက တစ်ခုလို့ အမေရိကန် နှလုံးအဖွဲ့အစည်းက ဆိုပါတယ်။
သည်လေ့လာချက်တွင် အကြော်များကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်စားသုံးသူများသည် နှလုံးအားနည်းနိုင်ခြေ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများသည်ဟု ပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။ တစ်ပတ်လျှင် လေးကြိမ်မှ ခြောက်ကြိမ် စားသုံးသူများသည် နှလုံးအားနည်းနိုင်ခြေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါတယ်။ တစ်ပတ်လျှင် ခုနစ်ကြိမ်နှင့် အထက် စားသုံးသူများသည် နှလုံးအားနည်းနိုင်ခြေ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါတယ်။
ဒါကြောင့် အာလူးချောင်းကြော်၊ ဒိုးနတ်၊ ငါးမုန့်ကြော်၊ ကြက်ကြော်၊ နှင့် အခြားအဆီသုံး၍ ကြော်ရသော အစားအစာများကို စွန့်လွှတ်ကြပါဟု နှလုံးပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။
ကျန်းမာသော အစားအသောက်သည် အသီးများ၊ အရွက်များ၊ ပဲများ၊ အနှံအစေ့များ ဖြစ်ပြီး ပြည့်ဝအဆီ၊ အသား၊ ဆား နှင့် အကြော်များ နည်းသော အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
အကြော်များစားသုံးခြင်းနဲ့ နှလုံးအားနည်းခြင်းရဲ့ စပ်ဆက်ပုံကို အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့တော့ ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
ပညာရှင်များက အဆီများသော အစာများသည် ကယ်လ်လိုရီပိုများသောကြောင့် အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောများခြင်း၊ နှလုံးရောဂါတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့ပြင် အကြော်များစားသုံးသူသည် ကျန်းမာသော အစားအစာများဖြစ်တဲ့ အသီးအရွက်နှင့် ပဲတို့ကို စားနိုင်ချေနည်းပြီး အသားများကို ပိုစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ အကြော်များစားသုံးခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပါက အကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် မစားသုံးသင့်ပါ။
သုတေသနပညာရှင်များက သမားတော်ကျန်းမာရေးလေ့လာခြင်း တွင်ပါဝင်သော အမျိုးသား ၁၅၃၀၀ ဦးထံမှ လေ့လာချက်များကို စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားများကို အစားအသောက် ကြိမ်နှုန်းများနှင့် ပတ်သက်ကာ မေးခွန်းများကို
သုံးနှစ်တာအထိ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်ခန့်အကြာပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြည့်သည့်အခါ ၆၃၂ ဦးတွင် နှလုံးအားနည်းခြင်း ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။
လေ့လာချက်များက အကြော်များ စားသုံးခြင်းနဲ့ အမျိုးအစား၂ ဆီးချို၊ အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း ၊ နှလုံးအားနည်းခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှု ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိပါတယ်။ ယခုနှင့် ယခင်တွေ့ရှိချက်များအရ ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံသည် နှလုံးအားနည်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေများအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ နှလုံးအားနည်းခြင်းသည် အဖြစ်များပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Fried foods tied to raised heart failure risk. https://webmd.com/heart-disease/heart-failure/news/20150303/fried-foods-tied-to-raised-heart-failure-risk. Accessed September 9, 2016.